Shakr: Gadzira Rako Bhizinesi Vhidhiyo Mavhidhiyo Pamhepo Uchishandisa Anoshamisa Matemplate | Martech Zone
Ndiri kunyatsofara pakufambira mberi kwevhidhiyo pamusoro pemakore apfuura. Bhizinesi rega rega rine mukana wekurekodha vhidhiyo yekambani yavo, asi hazvisi nyore. Kunze kwehunhu hwevhidhiyo, kuvhenekera uye odhiyo, pane iro basa rekugadzira reposvo rinonetesa kana kudhura. Ini ndinoda kuita mavhidhiyo, asi ndinowanzo tenderera kublogga kana podcasting nekuti zviri nyore kwazvo. Kuti vatengi vedu vabudirire, takavabatsira kuvaka ma studio kuitira kuti vagone kusvetuka pamberi pekamera uye nekungodzvanya rekodhi.
Haasi munhu wese ane hunyanzvi hwechikwata chevhidhiyo kunyorera, kurekodha, uye kugadzirisa mavhidhiyo kubva pakutanga. Kana iwe uine zviwanikwa zvekugadzirisa vhidhiyo, saiti senge Vhidhiyo zvakanaka pakuongorora nekutsvaga mavhidhiyo ekushandisa muzvirongwa zvako.
Asi ko kana iwe uchikwanisa kurekodha vhidhiyo asi ako mavhidhiyo anongoshaya yekugadzira inobata iyo inoita mavhidhiyo anoshamisa? Ndiyo mhinduro yacho Shakr akavaka. Vakabatanidza muunganidzwa wemavhidhiyo anoshamisa ebhizinesi rako:
Tsvaga iyo vhidhiyo yaungade kushandisa - unogona kuiridza yose:
Uye wozovhura yavo yakapusa mushandisi interface uko iwe kwaunogona kudhonza uye kudonhedza ako mavhidhiyo kana mifananidzo zvakananga mune zviitiko. Hapana kudikanwa kwekugadziriswa kwepamberi, shanduko, kana kunyorwa typography… zvese zvakagadzirirwa kuti iwe ubudise kunze kweinoshamisa vhidhiyo.
Haufanire kubhadhara vhidhiyo yako kusvikira iwe uchikwanisa kuitarisa zvizere ... chinhu chakanakisa cheplatform.
Saina Chikwangwani cheMahara Shakr Akaunti
Tags: Kushambadzira Vhidhiyoshakrvhidhiyo kuunganidzwavideo editormienzaniso yevhidhiyomavhidhiyo matemplate
May 6, 2016 pa 4: 30 AM
Doug, ndinoda nzwisiso yawakaita pamusoro paShakr kuve mukuru kune vanhu vanogona kuwana vhidhiyo, asi vanoda kubata kwekugadzira kuti vagadzire vhidhiyo inotyisa. KuSharr, isu tinotsigira zvakanyanya indasitiri yevhidhiyo uye akasiyana maturu ekugadzira mavhidhiyo pamusika. Ini pachangu ndinowanzo shandisa Screenflow, Vee ye iPhone uye nezvimwe. Shakr ine nharaunda yevanopfuura 1,550 vakanyoreswa vagadziri, vazhinji vacho vakaita basa remakambani makuru senge Nike, izvo zvinoita kuti mavhidhiyo avo magadzirirwo awanikwe kune vashandisi veSharr kuti vagadzire mavhidhiyo anotyisa nekubatanidza mavhidhiyo aripo nemavhidhiyo dhizaini.